Madaxwaynaha DDSI Oo Dhagax Dhigay Mashruuca Biyo Galinta Mula Iyo Shacabka Deegaankaasi Oo Si Wayn Usoo Dhaweeyay Mashariicaha Horumarka Ee Xukuumada DDSI. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo Dhagax Dhigay Mashruuca Biyo Galinta Mula Iyo Shacabka Deegaankaasi Oo Si Wayn Usoo Dhaweeyay Mashariicaha Horumarka Ee Xukuumada DDSI.
Mula(CN) Isniin.Feb.23.2015, sida aad wararkanagii hore kala socoteen CakaaraNews waxaa shalay casar gaaban uun magaalada Jigjiga soo gaadhay madaxwayanaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafti wehelinaysay oo socdaal hawleed ku gaadhay deegaanada u dhaxeeya degmada Qabribayax iyo tuulada Sanxaskule ee degmada Goljano halkaas oo uu madaxwaynuhu mashaariicana xadhiga kaga jaray kuwana dhagax dhigay iyadoo uu kulamo wadatashi ahna layeelanayay bulshada kudhaqan deegaankaasi.
Madaxawayanaha iyo socdaalkiisan waxaa kuwehelinayay wafti ay kamid ahaayeen wasiirka xafiiska kahortaga iyo u diyaar garowga masiibooyinka ee DDSI mudane Maxamed Daahir, maareeyaha wakaalada dhismaha hawlaha biyaha ee DDSI mudane Maxamed Cabdi Waaxid, maareeye kuxigeenka wakaalada daraasaadka iyo naqshadaynta ee DDSI mudane Haadi iyo masuuliyiin kale.
Madxwayne Cabdi Maxamuud ayaa markuu xadhiga kajaray mashruucii biyo galinta tuulada Sanxaskule oo kulamo dhanka horumarka ah kulayeeshay shacabka islamarkaana kula dardaarmay in si gaar ah loo eego agoonta, danyarta, iyo haweenka mar uu kalahadlayay isticmaalka biyaha, ayaa u soo jahaystay galabnimadii dhanka tuulada Mula oo ay madaxwaynaha iyo waftigiisani u hoydeen habeen hore.
Wuxuu madaxwaynuhu subaxnimadii shalay dhagax dhigay mashruuca biyo galinta tuulada Mula ee degmada Qabribayax ee gobolka Faafan oo hada si toos ah loo bilaabay kaasoo ay bulshada deegaankaasi aad usoo dhaweeyeen gaar ahaan sida ay xukuumadu uga jawaab bixinayso baahida shacabkeeda islamarkaana heeganka ugu tahay.
Waxaana tuulada Mula ee ay madaxwaynaha iyo waftigiisu u hoydeen shalay kadhacay shir balaadhan oo ay kasoo qayb galeen madaxwaynaha iyo masuuliyiintii wehelinaysay iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaankaasi Mula, halkaas oo lagaga hadlay arimaha horumarka iyadoo ay shacabka ka muuqatay far xad wayn iyo rayn rayn maadaama ay xukuumadu kawar qabto nolosha dhabta ah ee bulshada diyaarna u tahay wax qabad iyo isbadalkan xawliga ah.
Bulshada ree Mula ayaa sheegtay in ay marka hore aad ugu faraxsanyihiin madaxwaynaha iyo waftigiisa ee nolosha dhabta ah lawadaagay bulshadooda xalayna la cid galay ree Mula. Qaar kamida wax garadka deegaankaasi Mula ayaa shirkaasi kasheegay in ay sidoo kale aad ugu faraxsanyihiin xukuumadana uga mahad celinayaan biyo galinta Sanxaskule oo jaarkooda ah iyo biyo galinta uu maanta madaxwaynuhu dhagax dhigay ee Mula.
Mar uu madaxwayne Cabdi Maxamuud kahadlayay mashaariicaha biyaha oo ah baahida koobaad ee deegaanka ayuu sheegay in ay xukuumadu dadaalka ugu wayn galisay dhanka biyaha wax badana ka qabatay islamarkaana ay wali jiraan baahi badan oo biyaha ah. Sidoo kale wuxuu madaxwaynuhu carabka ku dhuftay mashaariic kale oo deegaankaasi laga bilaabay oo ay kamid yihiin caafiimadka, waxbarashada iyo jidadka.
Shirkan oo ay kusugnaayeen masuuliyiinta wakaalada dhismaha hawlaha biyaha iyo wakaalada daraasadka iyo naqshadaynta DDSI oo kahadlay ayaa waxaa sidoo kale halkaasi kahadlay wasiirka DPP mudane Maxamed Daahir.
Isku soo wada duub oo madaxwayne Cabdi Maxamuud oo bulshada geed geed ugula kulmayay ayaa shacabka kulamo badan kulayeeshay isagoo darsayay kolba xaaladooda nololeed islamarkaana kala arinsanayay qorshayaasha isbadal ee kusalaysan baahidooda.
Kala soco CakaaraNews wararka xiga qaybihii kale ee socdaalkii madaxwaynaha iyo centerka Qooraan.